Home EUROPEAN FOOTBALL STORIES Ndị egwuregwu bọọlụ Italiantali Domenico Berardi Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Utold Biography
LB na-egosi Full Story of a Football Football with the nickname “Mimmo”. Anyị Domenico Berardi Childhood Akụkọ gbakwunyere akụkọ banyere Untold Biography Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị ama ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Ndụ na ịrị elu nke Domenico Berardi. Ebe E Si Nweta Foto: Sportmirtese, Castrumcropalatum na EgwuregwuMole.
Nyocha a gụnyere ndụ ya n'oge, ndụ ezinụlọ, ndụ onwe onye, ​​eziokwu ezinụlọ, ụdị ndụ ya na ihe ndị ọzọ a ma ama banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ọdịdị na anya ya maka mgbaru ọsọ. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle Domenico Berardi's Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị ọzọ ado, ka anyị malite.
Domenico Berardi Childhood Story Plus Ihe Nlekọta Ndị Na - adịghị Eke Eke Ndụ - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ
Domenico Berardi Amụrụ na ụbọchị 1 nke August 1994 na Cariati, obodo dị na mpaghara Cosenza na mpaghara Calabria nke dị na ndịda Italytali. Ọ bụ ọdụdụ nwa n'ime nne atọ mụrụ nne ya, Maria na nna ya, Luigi.
Domenico Berardi mụrụ nne na nna ndị amachaghị banyere ha. Ebe E Si Nweta Foto: PxHere na Sportmirtese.
Onye agbụrụ oftali nke agbụrụ ọcha na nke nwere obere amamịghe gbagoro na Bocchigliero obodo Cosenza n'ógbè Italy ebe ọ tolitere na nwanne ya nwoke nke okenye, Francesco na nwanne nwanyị, Severina.
Domenico Berardi toro na Bocchigliero dị na Cosenza. Ebe E Si Nweta Foto: WorldAtlas na Sportmirtese.
N'ịbụ onye tolitere n'obodo, Berardi abụghị onye ngọpụ nke ga-enye ya ohere iso ndị enyi ya gbaa bọl na egwuregwu kwa ụbọchị n'izu. Mgbe ụfọdụ, ọ na-eme onwe ya dịka ọ nwere afọ mgbu iji pụọ n'ụlọ akwụkwọ wee nwee ọ playingụ igwu egwuregwu ahụ.
Domenico Berardi Childhood Story Plus Ihe Nlekọta Ndị Na - adịghị Eke Eke Ndụ - Nkụzi na ịrụ ọrụ
Site n’ọmụmụ n’ime ezinụlọ hụrụ bọọlụ n’anya, etinyerela Berardi aha na ụlọ akwụkwọ bọọlụ Castello na Mirto - Hamlet nke Crosia, nke dịkwa na Cosenza, --tali - ebe o mere nzọụkwụ mbụ ya na ịgba bọl asọmpi.
Domenico Berardi weere nzọụkwụ mbụ ya na asọmpi ịgba bọl n'ụlọ akwụkwọ football Castello. Ebe E Si Nweta Foto: Sportmirtese na TUON.
Mgbe ọ na-azụ na thelọ Akwụkwọ ahụ, Berardi mụtara ma gosipụta nkà nke na-egosi ihe atụ dị mma maka akara mgbaru ọsọ ọ ga-abịa. N’ihi nke a, onye nkuzi ya na-elekọta ndị otu ya ugboro ugboro n’inyefe ya bọọlụ maka mgbaru ọsọ doro anya.
Domenico Berardi Childhood Story Plus Ihe Nlekọta Ndị Na - adịghị Eke Eke Ndụ - Ndụ Ndụ Mmalite
N'oge Berardi dị agadi 13 na 2008, ọ gbachiere ndị ibe ya ozi ọfụma na Mirto iji banye n'ụlọ akwụkwọ football nke Cosenza ebe ọ ga-anọ obere oge ọrụ ntorobịa ya (2008 – 2010).
Domenico Berardi kaadị kaadị njirimara ikpeazụ tupu ọ sonyeere Cosenza. Ebe E Si Nweta Foto: Sportmirtese.
N'izu na-eme eme, Berardi gara mahadum nke nwanne ya nwoke nke okenye Francesco na Bodena. Mgbe ọ nọ n'obere ogige, ya na nwanne ya nwoke na ndị ọzọ nọ n'ime mahadum ahụ sonyere egwuregwu bọọlụ ise. Amaghi na Berardi, ndi choputara site na Sassuolo n’egwuregwu ndi lebara anya n'onyinye ego ya.
Domenico Berardi Childhood Story Plus Ihe Nlekọta Ndị Na - adịghị Eke Eke Ndụ - Ụzọ E Si Mara Aha
Ya mere, a kpọtara Berardi dị afọ 16 na Sassuolo ebe o bilitere n'ogo dị elu. Berardi mere nke mbụ ya maka ọgbakọ klọb mbụ na 27 nke August 2012 n'oge Serie B megide Cesena wee gaa n'ihu nyere aka n'akụkụ ya nweta nkwalite na Serie A.
Ọ bụ ezie na ịrị elu Berardi nwere ike ibute ọtụtụ ọsọ ọsọ, ọ bụghị enweghị mkpebi siri ike. Onye na-agba ọsọ ịgba ọsọ nwere ọtụtụ egwuregwu na Europe na-achọ mbinye aka ya. Agbanyeghị, ọ gụrụ onwe ya na ya ezughi oke ma họrọ imezue usoro ọmụmụ ya na Sassuolo.
Domenico Berardi kpebiri mkpebi ịnọgide na Sassuolo n'agbanyeghị na-adọta nnukwu klọb ya n'ụdị dị mma. Ebe E Si Nweta Foto: Castrumcropalatum.
Domenico Berardi Childhood Story Plus Ihe Nlekọta Ndị Na - adịghị Eke Eke Ndụ - Na-ewu Onwe Gị Akụkọ
N'afọ ndị sochirinụ (2013 - 2015) Domenico gosipụtara bụ otu n'ime ndị na-eto eto na-agba mbọ n'egwuregwu andtali wee nweta ọtụtụ onyinye n'otu n'otu gụnyere onyinye 2015 Bravo maka ndị egwuregwu na-eto eto Europe kachasị ama ama.
Ihe ọzọ bụ? o nwere obi ụtọ ugboro atọ dị ka otu n'ime ndị na-eto eto kachasị elu nke 100 n'ụwa site na Don Balón na 2013, 2014 na 2015. Ngwa ngwa n'oge ederede, Berardi bụ Sassuolo kachasị oge niile na onye ọkpụkpọ a na-achọ nke ọma nke dọtara mmasị site na Roma, Tottenham na Liverpool. Ndị ọzọ, dịka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Domenico Berardi bụ onye kachasị asọpụrụ Sassuolo n'oge edere. Ebe E Si Nweta Foto: BleacherReport.
Domenico Berardi Childhood Story Plus Ihe Nlekọta Ndị Na - adịghị Eke Eke Ndụ - Ezigbo Ndụ Mmekọrịta
N’ịga n’iru banyere ndụ ịhụnanya Domenico Berardi, aha ole ka mmadụ nwere ike ịchọta n’akwụkwọ akụkọ ihe mere eme ya na kedu mmekọrịta mmekọrịta ọ dị ugbu a n’oge a na-ede akụkọ a?
Iji bido, amaghi na Berardi edela nwanyi obula tupu ya ezute enyi ya nwanyi ibu nwunye (nwunye ka o gha) - Francesca Fantuzzi. Francesca buru ụzọ hụ Berardi n'oge egwuregwu ndị ntorobịa wee mesịa kpọtụrụ ya na Facebook. Ha kewapụghị onwe ha kemgbe ahụ wee nwee ike ịnabata nwa nwoke ma ọ bụ nwa nwanyị n'oge ọ bụla.
Domenico Berardi na foto ya hụrụ n'anya nke aha ya bụ Francesca Fantuzzi. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram.
Domenico Berardi Childhood Story Plus Ihe Nlekọta Ndị Na - adịghị Eke Eke Ndụ - Ezi Ezinụlọ
Domenico Berardi sitere na ezinụlọ sitere na klas dị n'etiti. Anyị na-edepụta eziokwu banyere ndụ ezinụlọ ya.
Banyere nna Domenico Berardi: Luigi bụ nna Berardi. Luigi abụwo onye nwere mmasị na Inter Milan tupu amụọ Berardi. Ma, o nwere ebe dị nro maka Sassuolo nke nwa ya nwoke na-egwuri egwu. Nna na-akwado ụmụ atọ nyeere nkwado Berardi n'anya maka football ma nọgide na-akwado ya ruo taa.
Banyere nne Domenico Berardi: Maria bụ mama Berardi. Ọ bụ nwunye na-arụ ọrụ ụlọ nke nyere aka zụlite Berardi na ụmụnne ya. Nne na-akwado ụmụ atọ nwekwara mmasị na football. N'ezie, ọ bụ onye na - akwado Juventus FC na n'ezie, obere klọb nwata ya - Sassuolo.
Domenico Berardi bụ ndị nne na nna ndị amachaghị banyere ha. Ebe E Si Nweta Foto: ClipArtStudio na NyefeeMarket.
Banyere ụmụnne Domenico Berardi: Berardi nwere ụmụnne ndị okenye abụọ. Ha gụnyere nwanne ya nwoke Francesco na nwanne nwanyị Severina. Ọ bụ ezie na amachaghị ọtụtụ ihe banyere ụmụnne, ha abụghị ndị na-eme egwuregwu dị ka Berardi. Agbanyeghị, ha abụọ hụrụ bọl n'anya ma jiri oke mmasị na-eso egwuregwu ahụ.
Banyere ndị ikwu Domenico Berardi: Apụghị na ezinụlọ Berardi, amabeghị ihe banyere nne na nna ya na nna nna ya ebe a na-amatabeghị nwanne nna ya, nwanne nna ya, ụmụ nwanne ya, ụmụ nwanne ya na ụmụ nwanne ya.
Domenico Berardi Childhood Story Plus Ihe Nlekọta Ndị Na - adịghị Eke Eke Ndụ - Ezigbo Ndụ Onye
Na-ekwu okwu banyere ụdị Berardi, o nwere ọdịdị dị ịtụnanya nke na-egosipụta ụdị ndụ ndị mmadụ nke Leo Zodiac Sign na-eduzi. Na mgbakwunye, Ọ nwere nguzozi, nghọta na ezi obi gbadata n'ụwa.
Onye na-egwuri egwu nke na-ekpughere ozi gbasara oge ndụ ya na nke onwe ya, nwee ọdịmma na ntụrụndụ nke gụnyere asọmpi F1, ime njem, igwu mmiri, igwu egwuregwu vidio, ige egwu na iwere oge dị mma na ezinụlọ na ndị enyi.
Domenico Berardi nwere mmasị na asọmpi F1. You nwere ike ịhụ Charles Leclerc na foto? Ebe E Si Nweta Foto: Instagram.
Domenico Berardi Childhood Story Plus Ihe Nlekọta Ndị Na - adịghị Eke Eke Ndụ - Eziokwu Nzuzo
Banyere otu Berardi si eme ma na-emefu ego, ọnụ ahịa ya ka na-enyocha n'oge edere ebe ọnụ ahịa ahịa ya dị na nde € 20. Ndị nọ na Berardi obere akụ na ụba a ma ama na-esite na ego ụgwọ ọnwa na nkwenye ya.
Ọ bụ ezie na ọkpụkpọ ọkpụkpọ ahụ adịghị eme ngwa ngwa igosipụta akụ ya site n'igosipụta ụgbọ ala ya na okomoko dị ọnụ ala ya, ọ buru ibu na ịme njem dị oke ọnụ gaa ebe ntụrụndụ ebe ọ na-eji ego na oge ya na ndị enyi ya nọrọ.
Domenico Berardi na ezigbo enyi ya, Marco Benassi nọ na-atụrụ ndụ. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram.
Domenico Berardi Childhood Story Plus Ihe Nlekọta Ndị Na - adịghị Eke Eke Ndụ - Eziokwu efu
Akụkọ banyere nwata na akụkọ ndụ Domenico Berardi na-agbakọta nke ọma banyere eziokwu a dị obere ma ọ bụ nke amachaghị banyere ya.
Religion: Domenico Berardi abụghị onye isi na okpukpe ebe enwere ihe na-enweghị ihe na-egosi ihe o kwenyere n'oge a na-ede akwụkwọ. Ya mere apughi ikwuputa ya ma o bu onye kwere ekwe ma o bughi.
Ogbugbu: Berardi lere nka nka dika ihe di nkpa na akwukwo ya mara nma. Ya mere, o nwere otu nnukwu egbugbu na ogwe aka ekpe ya. Ogbugbu ahụ gosipụtara nọmba Berardi nọmba 25 na kpakpando nke nwere Roses. N'okpuru egbugbu a bụ ngwa ọrụ yiri arịlịka nwere ụdọ.
Domenico Berardi Tattoo na-enwe ọganihu. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram.
Smụ sịga na Mmanya: A maghị Domenico Berardi ị toụ sịga n'oge edere. Ebumnuche maka ụdị ibi ndụ dị otú a na eziokwu ahụ bụ na ọgụgụ isi nke football ahụ echefulaghị uru ndị a na-enweta site n'ibi ndụ dị mma.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ akụkọ nwata anyị Domenico Berardi gbakwunyere Untold Biography Facts. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike ka anyị mee ihe ziri ezi. Ọ bụrụ na ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
Lorenzo Insigne Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu